Izindaba Ezimbi ku-Doug's Dating Front ... | Martech Zone
Izindaba Ezimbi ku-Doug's Dating Front…
NgoLwesihlanu, Agasti 17, 2007 NgeSonto, Septhemba 30, 2012 Douglas Karr
Kubonakala kungahle kungabi khona 'izinhlanzi eziningi olwandle' njengoba bengingathemba! Ngabe likhona ithemba loMuntu Oyedwa weKhompyutha Geek?
Ngokwe-Bureau of Labor Statistics, abesifazane bagcwalise kuphela amaphesenti angama-26.7 ezikhundla zamakhompiyutha nezezibalo ngo-2006? Kanye namaphesenti ayi-16.6 kuphela azo zonke izikhundla zokuphatha inethiwekhi namakhompyutha.
Isithombe esivela IMac Chstein Mac Chick Yenyanga.
I-Google Analytics: Ukulandelela ikhasi lomuntu wesithathu
Ngithole kanjani ukuba nentshisekelo kwi-Social Media?
Aug 17, 2007 ngo-6: 06 PM
Uma noma ngubani engakwenza, unga, Doug!
Aug 18, 2007 ku-7: 50 AM
Impela bengiklolodela kulokhu ... ukukhathazeka kwami ​​kukabili. Ngiyakholelwa ukuthi ihhovisi, ubuholi kanye nenkampani kulinganiswa kangcono nabasebenzi besifazane. Kuyethusa impela ukuthi le mboni ayihehi abesifazane abaningi. Lokho kungikhathaza kabi.
Futhi-ke, ukuthatha isikhathi sokuhlekisa ngamahlaya empilweni yami yangasese kuhlala kuhlekisa. 🙂